Ronaldo Oo Garabka Ay Wax Ka Soo Gaareen Kulankii Barca Iyo Real Madrid - jornalizem
Ronaldo Oo Garabka Ay Wax Ka Soo Gaareen Kulankii Barca Iyo Real Madrid
Weeraryahanka Real Madrid Cristiano Ronaldo ayaa laga yaabaa in uu garoomada ka maqnaado waqti aan la cadeyn kadib markii uu garabka ay jug ka gaartay kulankii barbaraha ahaa ee 2-2 ku kala baxeen Barcelona.
Weeraryahankii hore ee Man United ayaa labo gool u dhaliyey kooxdiisa taasoo xaqiijisey in Real aysan kala tegin Camp Nou gacmo marnaan. Balse habeenka ayaa waxaa uu ugu dhamaaday 27jirka murugo kadib markii uu dhaawac soo gaaray.
Horaantii qeybtii dambe ee ciyaarta ayuu Ronaldo dhulka ku dhacay waxaana laga arki karay in uu xanuun hayo balse weeraryahanka reer Portuqal waa uu dhamaystey ciyaarta inkastoo baaritaano lagu sameeyey ciyaarta kadib ay cadeeyeen in uu dhaawac jiro.
Illaa iyo hadda si rasmi ah looma oga heerka uu gaarsiisan yahay dhaawaca soo gaaray waxaana la filayaa in baaritaano dheeraad ah lagu sameeyo.
Kabtanka xulka Portugal ayaa laga yaabaa inuusan ciyaarin kulamada is reebreebka ciyaarayaha adduunka ee 12ka iyo 16ka bisha ay la ciyaari doonaan xulalka Ruushka iyo Northern Ireland.